Kismaayo oo lagu dilay Dhoor qof oo lala xariirinayo Dilkii loo geestay Ciise Kaambooni « AYAAMO TV
Kismaayo oo lagu dilay Dhoor qof oo lala xariirinayo Dilkii loo geestay Ciise Kaambooni
787 Views Date February 18th, 2014 time 12:12 pm
Wararka ka imaanaya Mgaalaada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubaa Hoose ayaa sheegaya in habeenkii xalay Magaaladaasi lagu dilay ilaa afra qof oo lala xariirinayo in ay gacan ka geesteen dilkii loo geestay Taliyihii Ciidanka nabad Sugida Maamulka Jubba.
Dilka Xalay Kismaayo loogu geestay Ciise Kambooni Taliyihii Nabad Sugida Maamulka Jubba ayaa lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay nin ay ehel ahaayeen oo kasoo goostay Al-Shabaab kaa oo rasaas badan huwiyay Taliyaha iyo Ciidamo la socday.
Ciidamada Maamulka Jubba oo aad uga carooday Dilka Tiliyaha Nabad Sugida loo geestay ayaa durba waxa ay dileen Rag ehel la ahaa Ninka Dilka lagu eedeeyay waxaana raga la dilay ku jira kuwa damiintay markii uu Al-Shabaab kasoo goostay uu Kismaayo yimid.
Ciidamada Dilka u geestay ragaan waxa ay ku eedeeyeen in Xariir toos ah la lahaayeen ninkan dilka geestay , waxa kale ay ku eedeyeen raga ay dileen n Xariir kala dhaxeeyay Xarakada AL-Shabaab oo iyadu sheegatay Masuuliyada Dilka Ciise Kambooni.
Wasiirka arimaha gudaha iyo amniga maamulka Jubba Max’ed Warsame Faarax (Darwish) oo ka haday Dilka Ciise Kambooni ayaa ku eedeeyay Al-Shabaab in ay ka dambeeyeen Dilka Ciise Kambooni una adeegsadeen nin horey uga soo goostay.
“Waxaan idin sheegayaa in aan la aaminin dadka kasoo goostay Al-shabaab ee isa soo dhiiba, shabaab malahan adeer, walaal iyo abti midna aamina ma galaan ” ayii yiri .Max’ed Warsame Faarax (Darwish) .
Dilka Xalay Magaalada Kismaayo loogu geestay Taliyihii Nabad Sugida Maamulka Jubba ayaa si weyn looga dareemayay Magaaladaasi , waxaana wali socda Howlgalo lagu raadinayo kooxihii dilkaasi ka dambeeyay.